त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै प्रहरीले ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यीमध्ये १० जना युएईमा बस्ने नेपाली छन् र उनीहरुलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन ।
सहयोगी एसएसपी थुनामा, १८ जना फरार
२२ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै प्रहरीले ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यीमध्ये १० जना युएईमा बस्ने नेपाली छन् र उनीहरुलाई प्रहरीले समात्न सकेको छैन ।
आइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्केच नै बनाएर टेलीफोन नम्बरसहित ३० व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीको दाबीअनुसार युएईमा १० र नेपालमा ८ जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पर्न बाँकी छ ।
प्रहरीको दाबीअनुसार सुन तस्करीका नाइके हरिशरण खड्का हुन् । उनी युएईमै बस्छन् । युएईमा बसेर सुन तस्करीमा खड्काको नेटवर्क अन्तरगत काम गर्नेहरुमा ध्रुब, रोशन गुप्ताल भुसाल, कृष्णगोपाल अग्रवाल, राजनप्रसाद पन्त, अर्जुनप्रसाद खरेल, चूडामणि उप्रेती, केशव चापागाई, सञ्चय भनिने दुर्गाप्रसाद खरेल र गोपाल भुसाल छन् ।
एयरपोर्टमा कोको संलग्न ?
१२ समातिए, १८ उम्किए
प्रहरीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने १८ जना फरार रहेको जनाइएको छ । पक्राउ परेकाहरुमा एसएसपी श्याम खत्री, युएईबाट सुनको लगेज ल्याउने गोपाल शाही समेत छन् । पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिहरुमा सन्तोष काफ्ले, दिलबन्धु थापा, श्रीनारायण यादव, राजकुमार खरेल, श्याम श्रेष्ठ, रामहरी कार्की, मनोज श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, राजेश शाक्य र सपन श्रेष्ठ छन् ।
बाँकी सबै फरार छन् ।
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: ३३ किलो सुन तस्करीका नाइके पक्राउ ! नाम सार्वजनिक (सूचिसहित)